Mpaghara dị ịtụnanya nke Saint Denis na Paris | Akụkọ Njem
Mpaghara dị ịtụnanya na Saint Denis na Paris
Mariela Carril | | Francia, Paris
Paris bụ otu n’ime isi obodo ndị njem ụwa ọ na-ewe ihe karịrị otu njem iji chọpụta ya.
O nwere otutu nkuku, otutu ulo ihe ngosi nka, otutu ulo nri na ebe di nma ileta n’oge obula. Otu n’ime ala ịta ahịhịa ya bụ sain- Denis, nke dị n'okpuru otu kilomita site na etiti isi obodo France.
2 Otu esi aga Saint-Denis
3 Ihe ị ga-ahụ na Saint-Denis
4 Ndụ abalị na Saint-Denis
Saint-Denis bụ otu ógbè dịpụrụ adịpụ n'ebe ugwu nke Paris ama n'etiti ndị njem nleta maka inweta Basilica nke Saint Denis ebe ọtụtụ n'ime ndị eze France zuru ike na n'ihi na ọ bụkwa ebe Stade de France a ma ama dị, egwuregwu bọọlụ na ịgba egwuregwu rugby.
St Denis nwere Gallic Roman si malite, Ma mgbe mgbasa nke Iso Christianityzọ Kraịst na ala ndị a tụbara ndị nwụrụ maka okwukwe mbụ ha, akụkọ ntolite ya gbanwere mgbe e liri bishọp mbụ nke Paris, Saint Denis, ebe a mgbe e gbusịrị ya na Montmartre.
Emechara Abbey nke otu aha ahụ na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ nnukwu ụlọ ndị Gothic nke mara mma, bụ nke, mgbe e mechara ya, e lie ozu ma ọ bụ ihe ncheta nke onye nsọ France, Saint-Denis.
Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere akụkọ ihe mere eme nke okpukpe otu agha dị mkpa ndị Katọlik na ndị Protestant lụrụ n’obodo ndị a n’afọ 1567, nke mbụ meriri na nke mechara kwụsị na Katọlik nke Eze Henry nke Anọ.
E mesịa abbey necropolis ghọrọ ebe izu ike ebighi ebi nke ndị eze Gallic nke ikpeazu bu olili ya dika eze bu Louis nke XVIII na 1824. Site na ochichi nke ndi eze na-apụ n'anya, mpaghara a nke Paris tufuru ebube ya ma jiri nwayọ malite ịbụ obodo, mepere emepe ma meziwanye.
Ndị bi na ya si na ndị ọrụ ugbo gaa ndị ọrụ ya mere na mmalite nke ọgụ mgba mmekọrịta ọha na eze Saint-Denis ghọrọ ebe ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa na socialism nwere mbụ mmeri nke ọchịchị ebe a nke mere ka amara ya dika la obodo red ma ọ bụ Red Villa.
Otu esi aga Saint-Denis
Saint-Denis bụ ọkara otu awa site na etiti Paris na ihe mbufe njem na-eje ozi ha bụ tram, Metro, RER na Transillien. E nwere ọdụ ụgbọ oloko Saint-Denis nke malitere na etiti narị afọ nke iri na itoolu na mgbe ọ bụla ụzọ njem m kpọrọ aha nwere ọtụtụ ọdụ na agbata obi.
Ọ bụrụ na i were Usoro Metro 13 ị nwere ọdụ ụgbọ elu Université, ọdụ Carrefour, ọdụ ụgbọ Porte de Paris bụ nke kacha nso na Stade de France na ọdụ Saint-Denis Basilica, dịka ọmụmaatụ.
Ihe ị ga-ahụ na Saint-Denis
Saint-Denis bụ ihe ọtụtụ omenala ihe ị ga-ahụ na Paris. Lee ndụ Africa, Kurdish, Pakistani, Algeria, China, Turkish, India na ọtụtụ ndị ọzọ. Offọdụ n'ime ha enweghị akwụkwọ ma ọ bụ ikike ịnọ na mba ahụ mana ha bi, na-arụ ọrụ na France. Na ọtụtụ, ọtụtụ amụrụ ndị nne na nna si mba ọzọ.
Ọ bụrụ na ị jụọ ndị ọrụ njem nleta, nke a bụ mpaghara ebe ọ bụ iwu na ị ga-akpachara anya n’ihi na ọgwụ ọjọọ na mpụ na-agbasa. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọta ya, mgbe ahụ ị ga-ebuga njem ọhaneze ma nọrọ ebe ehihie na-awagharị.
St Denis ọ bụ enyo nke Paris nke taa, onye nketa nke French oge ochie colonial, ma n'ihi na ndị ejiji na-alaghachi nke a oge na- akụkụ abụwo ebe njedebe maka hipster y ndiegwu Ndi Parisi nwere ochicho nke uto.
Saint-Denis bụ ọkara awa ụgbọ okporo ígwè si etiti nke Paris na taa maka ọtụtụ ọ bụ ebe kachasị dị ize ndụ na isi obodo French. Multiculturalism, nke ndị Alakụba bara ụba, bụ nke oke ifufe ahụ na ọtụtụ na-atụ egwu na ọ ga-abụ ebe ọmụmụ maka ndị na-eyi ọha egwu n'ọdịnihu.
Okporo ámá ndị dịpụrụ adịpụ gbara gburugburu n'okporo ụzọ a na-akpọ Ruo du farbourg St Denis ebe ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ nke ị nwere ike ịnụ ụtọ nri Indian, Pakistani ma ọ bụ nke Africa. E nwekwara ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'okporo ámá, na-eti mkpu, na-eme mkpọtụ.
Streetzọ ọzọ akwadoro ị ga-aga bụ n'okporo ámá Montorguielna ụlọ oriri na ọ cafụ andụ na ụlọ ahịa Onyeka, na ndị na-agụ Ụwa kamakwa ndi mmadu sitere n’agburu nile. Ma ọ bụ na ọ gaghị abụ Paris ma ọ bụrụ na enweghị tiketi, n'ezie.
Bụ Itie Petite Ọtụtụ narị afọ, n’ikuku ma jupụta n’osisi, ebe a na-emepe ụlọ oriri na ọ barsụ ,ụ, ebe a na-ere ihe ọ cafụ andụ na ebe a na-ere ahịa na mgbe Tuesday ọ bụla n’elekere asaa nke abalị bụ ebe a na-ezukọ maka ndị ọrụ ubi na-ere ngwaahịa ha.
El Itie Brady Ọ bụ ọmarịcha akwụkwọ mara mma, nke ejiri iko mee, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, nke yiri obere India. Akụkụ ọzọ bụ el Itie Prado, nke yiri leta L, nke nwere uko iko na ihe osise-nouveau.
Ọnụ ụzọ Saint Denis bụ njiri mara mmeri nke Carlos nke V wuru ma mezikwa ya nke Luis nke Iri na ano site na ya bu ndi eze ndi chiri okpueze na Basilica na Saint-Denis batara Paris. Na ngwụcha nke 80s, ewughachiri ya na ọrụ nke were afọ iri: 25 mita dị elu, mita ise n'obosara ma mara mma.
N'ezie Basilica Saint-Denis ọ bụ ihe kacha adọrọ mmasị. Abbey medley bụ nnukwu akụkọ ihe mere eme na ụkpụrụ ụlọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ daa kpamkpam na mgbanwe nke French ebe ọ bụ na ọ na-anọchite anya ndị eze ma naanị ụka hapụrụ ka ihe niile ọzọ, ihe ọkpụkpụ, abbey, ili mebiri emebi.
Ezie na ọ bụ n'ezie necropolis taa e nwere nanị ili ndị eze fọdụrụ n’ime ọtụtụ ndị ọ maara inwe n'ihi na oge na-adịghị anya na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, e meghere ili nke Bourbons, Valois, Plantagenet, bibie ya ma ọ bụ furu efu ma ọ bụ gafee na ezigbo ili ozu na-enweghị ọtụtụ egwu na ihe kpatara ya.
Bonaparte meghere ụlọ ụka ahụ ma emetụghị ili ozu. Na 1817 ndị Bourbons nyere iwu imeghe ha, n'agbanyeghị na ha achọta ntakịrị. E debere ihe fọdụrụ n’ahụ́ ndị eze nwanyị na ndị eze 158 n’ebe ndebe ndebe dị n’akụkụ ugwu nke chọọchị ahụ bụ́ ebe e dere mbadamba mabụl ha.
Ọ bụrụ na ị gaa na chọọchị ị ga-ahụ ihe a niile yana kwa crypt pụrụ iche nke ndị Bourbons ebe e liri ozu ahụ Louis nke Iri na Isii na nwunye ya Marie Antoinette nke Ọstria Naanị na 1815. You ga-ahụkwa ili nke ndị eze ndị ọzọ, ndị eze nwanyị na ndị a ma ama, ụfọdụ n’ime ha si na abbe na ụka ọzọ.
Ọ bụ otu onye na-ese ụkpụrụ ụlọ weghachiri Katidral Notre Dame na narị afọ nke XNUMX.
Ndụ abalị na Saint-Denis
Ọ bụrụ n’ịchọghị nchekwa nke nnukwu obodo, ọ gaghị adị mma ileta Saint-Denis n’abalị., Ọ gwụla ma ị na-eme njem n'otu ìgwè, na-asụ French nke ọma ma ọ bụ nwee ndị enyi ebe a. Ọ bụrụ otu a, agbataobi ahụ amaka n’abalị.
Ihe a masịrị gị nightlife onye isi? Yabụ ebe a bụ Mecca gị na Jeannette, saịtị nke dịkarịa ala afọ iri ise ma ọ bụ nke ndị na-eto eto na-ewu ewu taa. Eat na-eri nri French, enwere enyo narị afọ nke iri na itoolu na tebụl Formica ochie.
Na-emegide bụ Mauri 7, ụlọ mmanya nwere mgbidi dị n'ime nke ejiri ihe mkpuchi nke ndekọ LP chọọ yana ụfọdụ tebụl ndị dị na Passage Brady. Bụkwa imebi na nnukwu ụlọ nke Au, ma ọtụtụ ụlọ mmanya na kọfị na-apụta dị ka ero mgbe ụbọchị mmiri ozuzo na iru mmiri gasịrị.
Dị ka ị hụrụ Saint-Denis bụ ọgaranya na ebe na-adọrọ mmasị na Paris. Ihe isi obodo French na-esonye na isi obodo Europe ndị ọzọ na-ahụ ya, multiculturalism, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịbendị ọdịnala, ọ ga - eme gị ọgaranya ma kụziere gị ihe, ọ bụ ije nke ị na - ekwesịghị ịhapụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Mpaghara dị ịtụnanya na Saint Denis na Paris
Ndewo na-ekele gị nke ukwuu maka ozi,
Echere m na ị na-agwakọta ebe abụọ dị iche iche n'otu isiokwu, ha abụọ bụ mpaghara dele de France.
Nke mbụ bụ, n'ụzọ dị irè, obodo nke Saint Denis (nke dị na mpụga Boulevard Périphérique ma yabụ n'èzí ihe a na-ewere dị ka etiti Paris, nke nwere mpaghara 20 ya). Nke a bụ ebe enwere ike ịchọta Katidral ahụ ma ọ dị mfe ịnweta ya site na metro 13. Dị ka a kpọtụrụ aha, ọ bụ otu n'ime ebe ọdịbendị kacha dị iche iche n'ihi ọpụpụ.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere mpaghara gburugburu ọdụ ụgbọ oloko a na-akpọ Strasbourg-Saint Denis (ahịrị 8, 4 na 9), ebe anyị nwere ike ịchọta akara na foto ahụ yana ụlọ nri ndị India nke Passage Brady. Agbanyeghị mpaghara a dị n'etiti etiti Paris, ọ dịkwa n'etiti mpaghara 2 na 10, na nso République.
Ala mmiri nke ndị Hindu